Global Voices teny Malagasy » Angola : Ny Mozikan’ny Fanoherana, Androny Tahaka Ny Omaly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jona 2012 8:45 GMT 1	 · Mpanoratra Sara Moreira Nandika (fr) i Henri Dumoulin, avylavitra
Sokajy: Angola, Paortiogaly, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Tanora, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
[rohy amin'ny teny Portioge, raha tsy misy fanamarihana manokana] Tamin'ny faran'ny volana lasa, ny Amnesty International dia nanambara  ny mety hisian'ny faneriterena ny fahalalahana miteny arakaraky ny hanakaikezan'ny fifidianana tao Angola, izay mikendry indrindra indrindra ireo mpiangaly mozika “manana fiandaniana”. Ilay fanambaràna dia nitaky fanadihadiana lalina sy tsy mitanila taorian'ny herisetra nahazo ny tarika iray misy ireo mafàna fo avy amin'ny mpanohitra, dia ilay mpiangaly mozika rap “Hexplosivo Mental “.
Tapa-bolana taty aoriana, ny 11 jona, mpiangaly rap iray hafa tsy nanafina mihitsy ny fanoherany ny governemanta, Luaty Beirão, izay fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Ikonoklasta sy Brigadeiro Mata Frakuxz , no nosamborina  tao an-tseranam-piaramanidina noho ny fiampangana azy ho nanana rongony ‘cocaïne’ tany anatin'ny entany.
Marobe ireo aty anaty tambajotra sosialy no mihevitra fa ny tena antony marina nanagadràna an'i #Ikonoklasta  dia resaka politika satria ny teny mivantambantana fanaony dia iray isan'ny be mpihaino indrindra hatramin'ny nanombohan'ny nivadihan'ny fanehoana ny tsy hafaliana amin'ny filoha José Eduardo dos Santos , efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny 33 taona, ho lasa fanehoan-kevitra an-dalambe matetika ao Luanda renivohitra. Ny Martsa 2011, Luaty dia nosamborina nandritra ny hetsika ho fisorohana nataon'ny governemanta, nialoha ny hetsika iray nokasaina hatao ny 7 Martsa , izay nofoanana avy eo. Ny taona nanaraka io, nosamborina sy nodarohana  milisy mpomba ny fitondrana indray izy tao Cazenga.
Mandritra izay fotoana izay,”ny mozikan'ny Fanoherana” tamin'ny taona 1950 sy 1960 tao Angola dia nomem-boninahitra nandritra ny fihaonana iray nokarakarain'ny ONG Centro Interculturacidade  tany Lisbonne, tamin'ny fiandohan'ny Jona.
Nankalazaina ny fahatongavan'i Amadeu Amorim, izay tao anatin'ilay tarika isan'ny nanoratra ny tantara, N'Gola Ritmos  [amin'ny teny Anglisy]. Nandritra ny jery todika iray momba ny mozikam-pitolomaba, ny bilaogy Interculturacidade dia nanolotra  ilay tarika ho toy ny singa iray nanetsika ny hevitra mitaky fahaleovantena tao Angola ary noho izay no nisian'ny fanenjehana, faharavàna. Maro tamin'ireo mpikambana tao aminy no naiditra am-ponja. Nifonja nandritra ny fotoana ela i Amadeu tany amin'ny fonjan'i Tarrafal, nosy Saint Nicolas any amin'ny tangoro-nosin'i Cap Vert. Izy ihany koa no mpitarika nandritra ny fotoana elabe ny tarika Carlos Liceu Vieira Dias.
Tao anatinà tafatafa navoaka  tao amin'ny bilaogy ‘Nós Por Cá’ an'i Silvia Milonga, tamin'ny 2002, Amadeu Amorim dia nanazava ny fomba fijery ny N’gola Ritmos tao anatin'ny tontolo sosialy sy politika tamin'izany fotoana izany.
“Raha izany, dia fihokoana iray am-pilaminana niezaka ny hanaitra ny fahatsiarovantena nampatoritorian'ny fanjanahantany naharitra efa ho 500 taona sy efa tsy nanantena na inona na inona intsony izy ity. Tsy nisy fahitalavitra, tsy nisy fampielezampeo ho an'ny olona rehetra, tsy tonga tany amin'ireo tanàna sahirana ny gazety na tany ambany ravinahitra rehetra tany… saingy fantatray fa ny hira dia afaka mivelona eny an-dalambe, na hatao siotsioka na hoventesina am-bava ! Tamin'ireo fihaonan'ny Ligue Nationale Africaine, rehefa nihira tamin'ny teny Kimbundu  [fr] izahay, menatra nyt antsasaky ny olona ary nilaza anay ho : ireo Mussequeiros (mponina avy any musseques, ambanivohitra mahantra ao Luanda).”
Mpisava làlana amin'ny gadona Semba  (batucada), nalaky tamin'ny fanasisihana hafatra tany anatin'ireo “hirany mamim-bahoaka” ireo N’gola Ritmos, hafatra fitakiana mazava tsara izay nitondra tamin'ny faharavana aloha loatran'ilay tarika. Amadeu manampy ao anatin'ilay tafatafa hoe : “Tany amponja no niafaran'ny rehetra satria maro taminay no tafiditra mivantana tao anatin'ilay tolona ara-politika….. Taorian'ny fahavitan'ny sazy, voatery izahay niseho tany amin'ny polisy isaky ny 15 andro ary nanampy izany ny fandraràna tsy hahazo manao seho ho an'ny daholobe”. Noho izany, tonga ny ady, nisy ny fandraràna tsy hahazo mivezivezy amin'ny alina tsy maintsy narahana, tsy azo natao ny nivoaka alina.
Momba an'i Luaty Beião, mpanoratra iray, José Eduardo Agualusa, no nanoratra  tao amin'ny mombamomba azy ao amin'ny Facebook hoe : “Ireo rehetra mitolona amin'izao fotoana ho an'ny demaokrasia eto Angola dia lasibatra mila ajedaka avokoa, hita mazava be izany !”
Ny bilaogy Central Angola 7311 dia namoaka  fanamarihana iray milaza fa Luaty dia voatàna ao amin'ny Campus Justiça miandry ny hisehoany eo anatrehan'ny fitsarana amin'ny 13 jona. Marihana fa tsy mbola nisazy izy talohan'izao, fa fotsiny nanaraka ilay tarika nandritra ny taona iray taminà tolona am-pilaminana. Tahaka ireo maro hafa ao Luanda, izy dia, araka izay nahitàna azy, niharan'ny teritery ara-batana, ara-tsosialy sy ara-politika. Soa ihany, tsy tany Luanda izany no nitranga ary antenainay fa mba ho tsara fiafara ity tantara adaladala ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/18/34408/
 dia nanambara: http://www.amnistia-internacional.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:angola-e-necessario-proteger-a-liberdade-de-expressao-na-sequencia-de-ataques-a-jovens-ativistas&catid=43:angola&Itemid=109
 no nosamborina: http://makaangola.org/2012/06/rapper-luaty-preso-em-lisboa/
 hetsika iray nokasaina hatao ny 7 Martsa: https://pt.globalvoicesonline.org/2011/03/16/angola-manobra-de-antecipacao-anula-revolucao/
 dia nanolotra: http://interculturacidade.files.wordpress.com/2012/06/encontro-amadeu_amorim.jpg
 tafatafa navoaka: http://www.nexus.ao/milonga/ver.cfm?m_id=6838
 no nanoratra: http://www.facebook.com/jose.agualusa/posts/348560561880504